Sina Ny orinasa mpanamboatra herinaratra | Jitai
Izy io dia vita amin'ny alàlan'ny milina fametahana na milina fanodinana CNC, tsy ilaina ny maodely miendrika famokarana taloha. Miaraka amin'ny famolavolana malefaka, vanim-potoana fohy amin'ny famolavolana, dia mitarika fitaovana fanoherana ambany isan-karazany ny fomba fitarihana. Ampiasaina amin'ny hybrid matevina sy manify. boribory miharo.
Ity trano tsara fanahy ity no karazana fivoriana lehibe ho an'ny Power Hybrid Integrated Circuit, ny fototr'izany dia vy mangatsiaka na varahina maimaim-poana amin'ny fitaovana conductive mafana tsara izay manaparitaka ny hafanana vokarin'ny fizaran-tany ivelany mankany ivelany haingana raha toa ka misy ny tsy fatiantoka ateraky ny fanangonana hafanana. mazàna dia manamboatra firaka vita amin'ny varahina misy colax vita amin'ny vy50, mety amin'ny filan'ny fivezivezena avo lenta matetika, ary mitombo avo roa heny ny fitarihana ary kely kokoa ny isany (mazàna 6 ~ 20) ny haben'ny trano dia lehibe kokoa ary manana ny firafitry ny fiangonana misy flange , mazàna izy io dia mampiasa ny plating Au raha mitarika.
* Ny fonenana dia mandray fitaovana CRS1010, manana famafana hafanana tsara izy.
* Ny fitarihana dia mandray fitaovana fanoherana ambany varahina vita amin'ny varahina amd fahaizana tsara ho an'ny ankehitriny.
* Ny fomba famehezana cap dia mandray ny teknolojia fanamafisam-peo mifampitohy.
* Ny paositry ny pin ny tany dia tokony ho faritan'ny mpanjifa.
* Ny sarony dia natao mifanaraka amin'ny refin'ny fisehoan'ny trano.
* Ny mpanjifa dia mifidy trano fonenana feno Au na mitarika plating Au mifidy izay ilain'izy ireo.
* Ny index rehetra dia mahafeno ny fepetra takian'ny GJB548B
Fizarana faharoa: Ny fitsipiky ny famolavolana ny trano fonenana angovo
Ny maody endrika ny trano fonenana herinaratra dia manana ivon-toeram-pamolavolana na milina fitotoam-bary CNC.
1.Ny fisafidianana fitaovana ho an'ny trano
Ny tranon-jiro dia matetika mampiasa vy mangatsiaka mihodina miaraka amin'ny fanaparitahana hafanana tsara.
2.Ny fisafidianana ny refy ho an'ny firafitry ny trano
① Fanamafisana ny hatevin'ny trano
Ny hermetisialy ilain'ny filàna ara-teknika dia ≤ 1 * 10-3Pa.cm3 / s ho an'ny vokatra fonosana metaly ka ny fiatraikany amin'ny hermetisialy ny hatevin'ny trano dia tokony hojerena amin'ny endriny. Mifototra amin'ny traikefa efa ela tamin'ny fanivanana, hiantohana ny hermetity ny vokatra, ny hatevin'ny tombo-kase ho an'ny fanamafisam-pahefana (fitaovana vita amin'ny vy mangatsiatsiaka) dia tokony hofehezina ≥1.5mm raha ny fetran'ny teknika fanaovana insulator fitaratra dia tsy tokony ho matevina loatra ny hateviny, matetika ambany noho ny 2mm. , ny trano mora mahazo deformation amin'ny fomba sivana amin'ny hafanana avo, ny famolavolana ny hatevin'ny rindrina ho an'ny trano dia tsy tokony ho kely loatra.
②Ny savaivony lavitry ny insulator fitaratra ao anaty trano
Ny volavola mahazatra ho an'ny trano fonenana dia ny vy mangatsiaka, glass fitaratra famehezana vy 、 4, 4, misy firaketana famehezana comperssion. vy mangatsiaka nanakodia mba hiantohana ny hermeticity ny trano, noho izany ny sakan'ny fitaovana tokony hamaly ny takiana.
Previous: Fonosana plug-in Sidewall
Manaraka: Fonosana vy fisaka
Feni firaka fonenana